A Message of Support for Our Burmese-American Families, Friends & Neighbors | Battle Creek Public Schools
ယခု ရက်သတ္တပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း အတွင်းရှိ များစွာသော သူတို့၏ ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်မှုများ ရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ BCPS တွင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်းသားများ နှင့် မိသားစုများကို တွေ့မြင်ပြီး၊ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ယဉ်ကျေးမှုများ၊ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏများ နှင့် အမွေအနှစ်များကို လေးစားဂုဏ်ပြုပါသည်။ ဘရ်ကတ် (Bearcats) သည် မတရား ရင်ဆိုင်ခံရသူများဖက်၌ ရပ်တည်မှုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော မြန်မာပြည်သူ/သားများနှင့် ရပ်တည်ပါသည်။ လူတိုင်းပြောဆိုသော စကားသံများကို ကြားပြီး၊ တန်ဖိုးထား၊ လေးစားပေးရမည် ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မြန်မာ-အမေရိကန်မိသားစုများ၊ မိတ်ဆွေများ နှင့် အိမ်နီးချင်းများ ၌ကျွန်ုပ်တို့ရပ်တည်ပါသည်။ သင်တို့အားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာမှာ ရှိနေကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ BCPS အဖွဲ့အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်းသားများ၊ ဝန်ထမ်းများ နှင့် မိသားစုများအတွက် ပံ့ပိုး ကူညီမှု ပေးနိုင်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြပါသည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် သင့်မိသားစု၊ အိမ်နီးချင်း သို့မဟုတ် အသိုင်းအဝိုင်း များ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဖြစ်အပျက်များကြောင့် ထိရောက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်း တစ်စုံတစ်ဦး ကို ပြောပြလိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်စာသင်ကျောင်း၏ ကျောင်းအုပ်ကြီး သို့မဟုတ် စာသင်ကျောင်းရှိ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ထံသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ BCPS အသိုင်းအဝိုင်းသည် သင့်အားကူညီရန် ဤနေရာ၌ ရှိနေကြပါသည်။
We know the recent events in Myanmar this week touch the lives of so many right here in our community. At BCPS, we see our students and families and seek to honor their cultures, identities and heritages. Bearcats stand up in the face of injustice. We stand with the citizens of Myanmar in their fight for democracy. We believe that everyone should haveavoice that is heard, valued and respected. To our Burmese-American families, friends and neighbors, we stand with you and we are here for you.
Our BCPS team is always available asaresource to support our students, staff and families. If you’d like to speak to someone about how the events in Myanmar are impacting your family, your neighbors or your community, please contact your school’s principal or Communities in Schools site coordinator. Our BCPS community is here to support you.